Farshaxanka: Waa maxay, sifooyinka iyo muhiimadda ay leedahay ifafaaladan | Saadaasha Shabakadda
Laanta saadaasha hawada iyo bayoolajiga labadaba waa la baranayaa cilmu-nafsiga noolaha. Tani waa wax aan ka badnayn u fiirsashada isbeddelka noolaha ee meertadooda nololeed. Taasi waa, kala duwanaanta astaamaheeda iyo meertada nolosha oo kuxiran astaamaha deegaanka ee waqtigaas jira. Cimilada iyo carrada iyo dhinacyada bayoolajiga labadaba waxay ku xiran yihiin cilmiga noolaha. Isbedelka cimiladu wuxuu si dhab ah wax uga beddelayaa cilmiga noolaha waxyaabo badan oo nool, taasoo ka dhigaysa mid aan ku guuleysan badbaadada.
Qormadan waxaan si qoto dheer ugu lafa guri doonnaa astaamaha ifafaalaha noolaha iyo sida isbeddelka cimiladu u saameynayo meertadooda nololeed. Ma rabtaa inaad ogaato sida xayawaanka iyo dhirku u nool yihiin? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska 🙂
1 Ujeedada falsafada
2 Dhibaatooyinka shimbiraha
2.1 Fiyoolajiyada dalagga iyo u kuurgelidda aragtida
3 Cilmiga canabka
Fenology daraasad ku samee taariikhaha ay bilaabanayaan wejiyada kala duwan ee horumarinta dhirta. Sidan oo kale, waxaa loogu diiwaan geliyaa sida ay u kala horreeyaan iyo u fiirsashada waxaa loo sameeyaa si loo falanqeeyo isdhexgalka lala yeelanayo noolaha kale. Tusaale ahaan, marka la eego dirxiga balanbaalis, waqtiga ay noqonayaan dirxiga waxay ku dhowdahay waqtiga ay digaagga noocyada shimbiraha qaarkood u baahan yihiin in cuntadooda ay koraan. Hagaag, waqtigaas waa lama huraan inuu isku mar dhaco si ay digaagdu u koraan. Haddii fiyoolajiyadda dirxiga wax laga beddelo, digaagdu cunto ma heli doonaan.
U fiirsashada waxaa la sameeyaa sanadka oo dhan waxaana loo duubaa si loo helo xusuus lagu kalsoonaan karo ee wareegga nolosha ee noolaha la bartay. Xogta tirada ee la xiriirta horumarinta dhirta ayaa sidoo kale la darsay. Tani waxay loola jeedaa isbarbardhiga kororka cabirka ee warshadda su'aasha ah ay soo martay, culeyskeeda, muggeeda, waxqabadka sawir-gacmeedka iyo halabuurka kiimikada.
Marka dhammaan xogta la helo, waad awoodi kartaa ogow habdhaqanka nafley badan waxay kuxirantahay waqtiga sanadka aan kujirno.
Waxaa muhiim ah in la ogaado cilmiga cilmiga jirka si loo dhiso, tusaale ahaan, meelaha shimbiraha ay buul ka dhigan karaan oo dammaanad ka qaadayaan guusha taranka. Waxaa jira noocyo badan oo shimbiro ah oo qatar ugu jira dabargoynta sababa la xiriira balaadhinta dadka ee magaalooyinka.
Shimbiraha haajiray dhibaato weyn kala kulmaan safaradahooda xilliyeed meelaha kale ee leh heerkul aad u wanaagsan. Tani waa sababta oo ah saameynta aadanaha waxay ka dhigan tahay in shimbiraha aysan haysan meelo ammaan ah oo ay ku nastaan ​​safarkooda dheer iyo buulkooda ka dib. Dhallinyaradu waxay u baahan yihiin daryeelka iyo cuntada lagama maarmaanka u ah waalidiinta inay siiso. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira isku dheelitirnaan bey'adeed oo bini'aadanku waxyeelleeyay.
Adoo saameynaya nooc gaar ah, dhammaan noocyada ay ku tiirsanaayeen qaab gaar ah waa la saameeyaa. Haddii nooc ka mid ah dhirta uu bakayluhu cuno uu ku dhinto aag, tirada bakaylaha ayaa hoos u dhici doonta, sidaas awgeedna noocyada ugaarsiga ku dhaca ee bakaylaha cuna. Tan waxaa loo yaqaan silsilad cunto.
Sidaa darteed, cilmiga cilmiga shimbiraha ayaa si taxaddar leh loo darsay. Taasi waa in la yiraahdo, wareegyadooda taranka, buulka, shukaansiga, socdaalka, iwm.. Sida aan gadaal ka arki doonno, isbeddelka cimilada ayaa si daran u saameynaya isku dheelitirka noocyadan iyo guusha ay ku sii noolaanayaan
Fiyoolajiyada dalagga iyo u kuurgelidda aragtida
Beerista, falsafada sidoo kale waa la falanqeeyay. Waxay u adeegtaa hagaajinta miraha dalagga, sida lagu yaqaan waqtiga ugu fiican ee lagu bacrimiyo, biyo ka badan ama ka yar, ama manjooyin si ay u kori karto uguna horumarto si dhammaystiran. Intaa waxaa dheer, waa lagama maarmaan in laga hortago cayayaanka iyo cudurada. Waxaa jira waqtiyo sanadka marka cayayaanka cayayaanka ay aad u firfircoon yihiin ayna tarmaan si dhakhso leh. Ogaanshaha tan, farsamooyinka ka hortagga ayaa la bilaabi karaa marka waqtiga ugu badan ee waxqabadyada cayayaanka ay soo dhowaadaan.
Waxaa la mid ah cudurada. Xilliga jiilaalka, marka la fiiriyo xaaladaha soo noqnoqda ee xun iyo roobabka, waxaa jira qoyaan badan. Qoyaanka badan ayaa sida caadiga ah keena cuduro ku dhaca dalagyada.
Si loo hagaajiyo wax soo saarka dalagga, fahamka aasaasiga ah ee saadaasha hawada ayaa muhiim ah. Wax ka ogow heerkulka, dabeylaha jira, noocyada daruuraha, iwm Waxay si weyn uga caawin kartaa daryeelka dalagyada.
Kaliya maahan beeraha, laakiin warshadaha wax soo saarkeeda xogta la isku halleyn karo waa muhiim. Tusaale ahaan, waa inaad ogaataa celceliska taariikhda ay inbadan oo kamid ah dalagyadii ku beeray ubax, miro, iyo bislaansho. Xogtaan ayaa muhiim u ah qorsheynta beeraha iyo warshadaha.
Haddii sidoo kale la ogaado saameynta ay xaaladaha deegaanku ku leeyihiin weji kasta oo ka mid ah horumarinta dalagga, horay ama dib u dhaca ku yimid muuqaalkooda waa la saadaalin karaa.
U fiirsashada falsafadeed ee la sameeyay muddo dheer, waxay u oggolaaneysaa in lagu soo gabagabeeyo cilmiga cilmi-baarista. Sidoo kale, waxay faa'iido badan u leedahay beeraha iyo warshadaha. Waxay si weyn u doorbidaa aqoonta taariikhaha suuragalka ah ee wejiyadaha kala duwan ee horumarka, muddada xilliyada kala-hooseeya ee kala geddisan, xilliyada loo qabtay iyo inta jeer ee ay ku soo baxaan dhacdooyinka noolaha.
Waxaan magacaabi doonnaa wejiyada cilmiga dhirta canabka si aan tusaale uga helno waxtarkeeda.
Geed canab ah oo ooyaya
Caleemaha ugu horreeya waxay soo baxaan (caleemo aan dabiici ahayn)
Xirmooyinka ugu horreeya
Cunsuriyadaha sii kala fogaa (waa ubaxyo)
Buruqyada ubaxa (kooxo si buuxda loo sameeyay)
Fall of stamens engegay (waxaa loo yaqaan curdling)
Xidhitaanka kutlada (kororka cabirka miraha)
Bilowga qiimaynta (luminta chlorophyll)
Mid kasta oo ka mid ah heerarka geedka canabka ah waad awoodaa ogaadaan hawlgalka iyo horumarka qaybaheeda. Waxaa muhiim ah in la ogaado iyaga si looga fogaado cayayaanka iyo cudurada qaar loona wanaajiyo bacrimintooda iyo waraabintooda. Waqti kasta oo sanadka ka mid ah waxay u baahan tahay daryeel kala duwan, sidaa darteed, waa inaad si fiican u daryeeshaa.
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan cilmiga noolaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Fenology